Tsy ampy rano…tandremo ny “infection urinaire”!
Amin’izao fotoanan’ny mafana izao indrindra no tena betsaka ny olona tratry ny “infection urinaire”, satria tsy misotro rano.
Noho ny mikraoba sy bakteria
Ny mikraoba na bakteria izay betsaka ao anatin’ny tatavia sy ny fantsona fandehanan’ny fivalanan-drano, amin’ny ankapobeny, no mahatonga ny “infection urinaire”. Na lahy na vavy dia ireto no tokony hatao hisorohana azy.
· Mila misotro rano : Ho fisorohana dia mila ovaina kely ny fomba mahazatra. Tsy maintsy misotro rano betsaka (1,5 litatra), amin’ny alalan’ny fivalanana mantsy no hivoahan’ny bakteria any ivelany.
· Tsy manao akanjo tery.
· Mivalan-drano foana ao aorian’ny fanaovana firaisana ara-nofo.
· Tsy mitazona fivalanan-drano.
· Rehefa mifafa dia avy any aloha mankany aoriana
Isaorana ny Profesora Rakotoarivelo Rivo,